Vanhu vanosvika mazana mashanu vakapotera paChimanimani Hotel munguva yemafashamu eCyclone Idai.
Munguva yemhirizhonga yekurwisana kwemarudzi emaTutsi nemaHutu munyika yeRwanda, vakawanda verudzi rwaiurayiwa rwechiTutsi vakakwanisa kupotera pane imwe hotera vakararama.
izvi ndizvo zvimwechetwo zvakaitika kuvanhu vakawirwa nedambudziko reCyclone Idai kuChimanimani, avo vakanopotera paChimanimani Hotel, kunyange hazvo vakanga vasiri kutiza kurwisana kwemarudzi.
Hotera iyi inonzi kubva musi wa 15 Kurume paitika mafashamu akasiya vakawanda vafa vamwe vasisina misha yavo, nanhasi ichiri kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko.
Mukuru weChimanimani Hotel, VaMandla Mataure, vanoti havana kuda kumbofunga kaviri panyaya yekubatsira vagari vemunharaunda yavo mushure mekuona vanhu vaingofamba vachitsvaga pakakwirira kuitira kutiza mvura.
“The day after, it was a Saturday, the day after Cyclone Idai, ndakakwira upstair pa first floor. Ndakaona vanhu vakawanda vachifamba, madzimai, vana, varume, vakatakura zvinhu zvavo just trying to find higher ground, pane shelter. So ndakangoti kune team yangu, haa, boys vhurai ma doors, vanhu ngavapinde,” VaMataure vanodaro.
Vanoti vanhu vave mukati vakavaisira moto kuitira kuti vakwanise kudziirwa nekuomesa zvinhu zvavo kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvinokonzerwa nekutonhorwa.
VaMataure vanoti vakakwanisa kuwanisa vanhu vese ava chikafu chaibikwa pahotera pavo, kuburikidza nerubatsiro rwavaiwana kubva kune vemabhizimusi vemunharaunda mavo pamwe nevekanzuru yavo.
Vanoti vakaona zvakakosha kuti vambosendeka zvekuita mari vabatsire vanhu vari kushupika ava, vachiti kusvika pari nhasi vachine vanhu vari pakati pemakumi masere nezana vachiri kugara pahotera pavo vasati vawana kwekuenda.
Hurukuro naVaMandla Mataure